ပုသိမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၆
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ်များရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အချို့နှင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများ၊ ရပ်ကျေး အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အများအပြားသည် စနစ်ဟောင်းမှ အကျင့်ပျက် အကျင့်ဆိုး များဖြစ်သော အဂတိ လိုက်စား၍ ဘက်လိုက် ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ၊ မလျော်သြဇာ သုံးခြင်းများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ပိုမို ဆောင်ရွက်နေခြင်းများ၊ အခွင့်ထူးခံ ယူနေမှုများ၊ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်နေမှု များအား ဆက်လက် ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရက အများ ပြည်သူများ ဈေးနှုန်း သက်သာစွာဖြင့် ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ရန် ၁၅၀၀ တန် SIM Card များကိုနိုင်ငံတစ်ဝန်း အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများ၏ အစီအမံဖြင့် ချထားပေးလျက်ရှိရာ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ငပုတော မြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ တွင် တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းကတ်များ မဲနှိုက် ရောင်းချခဲ့ရာ ရဲခေါင်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၌ ကျေးရွာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ကို စီမံခန့်ခွဲမှု ပေးထားကြောင်း၊ ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အထောက်အကူအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတို့က ဖုန်းတစ်လုံးစီ ယူပြီး လက်ကျန် SIM Card များ အား ရွာသူ/ရွာသားများသို့ မဲစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ ပေးခဲ့ကြောင်း၊ဖုန်း လျှောက်လွှာ တစ်စောင်ကို ၁၀၀ကျပ် ကောက်ခံပြီး သတ်မှတ်ချိန် မကျော်လွန်မီ တင်ထားသော လျှောက်လွှာများ ပယ်ချ ခံခဲ့ရကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သားမှာ မဲနှစ်ကြိမ် နှိုက်ခွင့်ရကာ ဖုန်းမဲပေါက်သူများမှာ SIM Card တန်ဖိုး ၁၅၀၀ အပြင်စာချုပ် စာတမ်းခ ၃၀၀၀ ပေါင်းပြီး ကျေး ရွာအထောက်အကူပြု အဖွဲ့သို့ ၄၅၀၀ ပေးဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ရဲခေါင်ကြီး ကျေးရွာနေ ဦးတင်ထွန်းက မြန်မာ သံတော်ဆင့်သို့ပြောကြားသည်။…
ပုသိမ်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်တွင်လည်း သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့၌ တန်ဖိုးနည်း SIM Card များ မဲပေါက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရပ်ကွက် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဒုအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တို့ စကားများပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက စာတမ်းပါ သုံးမြှောင့် သစ်သားတုံးဖြင့် ရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရဲစခန်းသို့ တိုင် ကြားခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
ငပုတောမြို့နယ်၊ ကျောက်တံခါး ကျေးရွာအုပ်စုတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာ ဘဏ်ကော်မတီ တို့မှ လယ်မလုပ်သော ဦးစန်းငွေနှင့် သေဆုံးသူ ဦးစန်းကြွေတို့၏ အမည်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ အခြား ဘဏ်ငွေ မထုတ်သူများ၏ အမည်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘဏ်ငွေများ လိမ်လည်ထုတ်ယူ နေပြီး လယ်ဧက အများ အပြား ပိုင်ဆိုင်သူများမှာ ဧကခွဲ၍ ဘဏ်ချေး ငွေထုတ်ယူခြင်း များကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထောက်ခံပြုလုပ်နေ ကြောင်း ကျောက်တံခါး ကျေးရွာနေ ဦးညိုစိမ်းက ပြောကြားသည်။
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ကျုံပဒုတ် ကျေးရွာတွင်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဘဏ်ချေးငွေများ လိမ်လည် ထုတ် ချေးခြင်းများ ရှိနေပြီး ဘဏ်စာအုပ် ပြုလုပ်ရာတွင် ၁၅၀၀ ကျပ် ပေးရခြင်း၊ လမ်းစရိတ် အဖြစ်၂၀၀၀ ကျပ် ပေးရခြင်း၊ ချေးငွေ အပြည့်အ၀ မရရှိခြင်း ဖြစ်ပေါ် နေသည်ဟု ဒေသခံများ ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များအား လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခန့်အပ်ထားရာ ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ လယ်ယာမြေ မှုခင်းများ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဖြစ်စဉ် တူညီသော အမှု ၂ ခုအား တစ်မျိုးစီ ဆုံးဖြတ် ပေးခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ ပေပင်လေး ကျေးရွာမှ ဒေါ်ရင်ကြည် နှင့် ဒေါ်စိန်တို့နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို့ ပိုင် လယ်ယာမြေ များအား အစဉ်အဆက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူများ ဖြစ်သော်လည်း မင်္ဂလာဆန်စက် ပိုင်ရှင် ဒေါ် ဟိုက်ဝေးက အကြွေးဖြင့် သိမ်းယူသွားခြင်း အပေါ် ကန်ကြီးထောင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဒေါ်ဟိုက် ဝေးအား အနိုင်ပေး ခဲ့ကြောင်း၊ မြို့နယ်အတွင်း ဦးညိုဆိုသူက ၎င်းအကြွေးဖြင့် အသိမ်းခံရသော လယ်မြေ များအား ပြန်လည်တောင်း ဆိုရာတွင် ဦးညိုအား အချုပ်ချထားပြီး သိမ်းယူသွားသူမှာ ယခုအချိန် အထိ ၃ နှစ်ဆက်တိုက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် လယ်ယာမြေ ဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အနိုင်ပေး လိုက်ကြောင်း ပေပင်လေးကျေးရွာ နေဒေါ်ရင်ကြည်က ပြောကြားသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မြို့နယ် အများအပြားတွင် ထိုကဲ့သို့ မတရားမှုများ ဖြစ်ပွားနေပြီး အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ချထားပေးသော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ပြည်သူများက ရွေးချယ်တင် မြှောက်ထားသော ရပ်ကွက်/ကျေး ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ကဲ့သို့သော ရပ်/ကျေး အထောက် အကူပြုအဖွဲ့များမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများတွင် အကြိမ်ကြိမ် တက်ရောက်ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာ စိတ်ဓာတ်နှင့် အရည်အချင်းများ ပြည့်မီခြင်း မရှိဘဲ အကျင့်ဆိုး၊ စရိုက်ဆိုးများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသူ ဦး ထွန်းထွန်းက မြန်မာသံတော်ဆင့်သို့ ပြောကြားသည်။
တံတားဦး၊ နိုဝင်ဘာ ၇
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးမြို့ အနောက်ဘက် ၁ဝ မိုင်ခန့်အကွာရှိ ရွာတော်လေး ကျေးရွာ ဖရဲစိုက်ခင်းတစ်ခုတွင် ကျောက်ဆည် မှအလုပ်လာလုပ်သော ဖရဲစိုက်ခင်းလုပ်သားနှစ်ဦးမှာ ပထမဆုံးစအလုပ်ဆင်းဆင်းချင်းနေ့တွင် ပိုးသတ်ဆေးလူးထားသော ဖရဲသီးကိုစားသုံးမိရာမှ တစ်ဦး သေဆုံးပြီး တစ်ဦးဆေးရုံတင်ထားကြောင်း တံတားဦးမြို့မရဲစခန်းမှ ယမန်နေ့ကသိရသည်။
သေဆုံးသည့်ဖရဲစိုက်ခင်းလုပ်သားမှာ ကျောက်ဆည်မြို့ မဲကုန်းကျေးရွာနေ အသက် (၁၄)နှစ် အရွယ်ရှိ ဖြိုးဝေဇော်(ခ)ပေါင်ချိန်ဆိုသူဖြစ်ပြီး ဖရဲစိုက်ခင်းကို ကျေးငှက်များသောင်းကျန်းသဖြင့် ဖရဲသီးကို ပိုးသတ်ဆေးလူးအဆိပ်ခတ်ထားကာ လယ်ကန်သင်းပေါ်တွင် ချထားသည်ကိုမသိဘဲ စားသုံးမိကြောင်း၊ ထို့နောက် ပေါင်ချိန်က စိုက်ခင်းအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ အောင်တိုးအား လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီး အဆိပ်လူးထားသောဖရဲစိတ် များကိုအတူတကွစားသုံးခဲ့ကြကြောင်း၊ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာတွင် ခေါင်းများမူးဝေလာသဖြင့် စိုက်ခင်းအလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်ကိုစိုင်းအား သွားရောက်အသိပေးရာမှ အဆိပ်လူးထားသော ဖရဲသီးများစားမိကြောင်းသိရသဖြင့် ယင်းနေ့ ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်တွင် ရွာမှ တံတားဦးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖြိုးဝေဇော်မှာ ယမန်နေ့ ညတွင်ပင်သေဆုံးသွားကြောင်း ကျေးရွာနေပြည်သူများထံမှသိရသည်။
နိုင်ငံတွင် ရွှေ၊ ငွေ မည်မျှရှိသည်ကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြရန် အစိုးရအဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားမည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းပြော
နိုင်ငံတော်တွင် ဘဏ္ဍာငွေ၊ နိုင်ငံခြားငွေ၊ ရွှေ မည်မျှရှိသည်ဆိုသည်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက လွှတ်တော်တွင် လာရောက်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်၌ ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
““ဒီတာဝန် ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ဒီတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်””ဟု သူရဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ပြောကြားသည်။
မွန်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးက လွှတ်တော်သို့ ရောက်ရှိသည့် အစီရင်ခံစာများတွင် ရွှေအကြွေးကိုသာ တွေ့ရပြီး တစ်နှစ်လျှင် ရွှေမည်မျှဝင်သည်ဆိုသည်ကို မသိရကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေ မည်မျှပိုင်ဆိုင်သည်ကိုမ သိရကြောင်း ပြောကြားချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက က အစိုးရအဖွဲ့ကို ရှင်းလင်းစေရန်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ အစီရင်ခံစာအရ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနအသီးသီးက နှစ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော်သို့ပေးရန် ကျန်ရှိနေသောငွေများတွင် ဘီလီယံ တစ်ထောင်ကျော်နှင့်အတူ ရွှေစင်ပိဿာချိန်တစ်သိန်းကျော် ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေပိဿာချိန် တစ်သိန်းကျော်၏ တန်ဖိုးသည် တစ်ကျပ်သားလျှင် ခုနစ်သိန်းနှင့်တွက်ပါက ကျပ်သန်းပေါင်း တစ်သိန်းခွဲခန့်ရှိသည့်အတွက် ရရန်ရှိကြွေးများကိုသာမပြောဘဲ နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာထဲသို့ ရောက်ရှိသည့်ရွှေများကိုလည်း ပြောကြားရန်လိုသည်ဟု ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးက ပြောသည်။
ထိုသို့ ပြည်သူကိုပွင့်လင်းစွာ အသိပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူက မိမိတိုင်းပြည်၏ အခြေအနေကိုသိနိုင်ပြီး ဂုဏ်ရှိ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသည်ဆိုသည်ကိုလည်း ဖော်ပြရာရောက်သည်ဟု ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုးကပြောကြားသည်။
စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာအရ နိုင်ငံတော်၏ ရငွေ၊ သုံးငွေများကို စိစစ်ရာတွင် ကြွေးကျန်များ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ရွှေကြွေးကျန်မှာ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးရန်ကျန်ရှိသည့်ရွှေများဖြစ်ပြီး သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက နှစ်စဉ် မည်မျှရရှိသည်ကို ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာ မလိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က မီတာခတွေ တိုးမကောက်ဖို့ အရေးကြီးအဆိုတင်တာကို လွှတ်တော်က အတည်ပြု လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ရှုံးနေတယ်လို့ ပြောနေပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာ မရှုံးဘူးလို့ အဆိုရှင် ဦးအေးမောက်က ပြောပါတယ်။
“အဓိကကတော့ ကျနော်တို့က အချက်တွေ အကြောင်းပြတာကတော့ နံပါတ်တစ်က ဒီနေ့ နိုင်ငံတော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရတာက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရသေးတယ်။ တနိုင်ငံလုံးနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကြားလောက်ပဲ ရသေးတယ်။ နံပါတ်နှစ်က ပျောက်ဆုံး ယူနစ်တွေ များနေတယ်။ လွှဲမှားစွာ စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်လည်း ပျောက်ဆုံးတယ်။ နောက်တခါ လူတွေရဲ့ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်း ပျောက်ဆုံးတာတွေရှိတယ်။ အဲဒါတွေဖြစ်နေတယ် ဒါတွေကိုလည်း ပြန်လေ့လာပေးပါ။ တကယ့်ပြည်သူအတွက်ကို တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းဒေသကြီးတွေက လျှပ်စစ်မီးကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရတယ်။ ပြည်နယ်တွေမှာက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရတယ်။ အဲဒါကို အချိုးညီအောင်လည်း ပြန်လုပ်ပေးဖို့။ နောက်တခါ ပြည်မနဲ့ ပြည်နယ်တွေ လျှပ်စစ် ၁ ယူနစ်ကို ဈေးနှုန်းကွာတဲ့ ကိစ္စ။ လျှပ်စစ် တယူနစ်ကို ပြည်နယ်တွေမှာက သုံးရာ လေးရာ ဖြစ်နေတယ်။ ပြည်တွင်းမှာက ၃၅ ကျပ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဖြစ်နေတာတွေ ဈေးနှုန်းကို နိုင်ငံတကာမှာလိုပဲ အိန္ဒိယတို့ ဘာတို့လိုမှာပဲ။ တချို့ဟာတွေကို ဈေးယူသင့်တာကိုယူ ဥပမာ – ဇိမ်ခံလုပ်ငန်းတွေမှာ ဈေးယူ။ နောက် အိမ်တွင်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကျရင် သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို လျော့ယူပါဆိုပြီး အဲဒါမျိုးတွေလည်း ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
“အစိုးရက သူတို့တင်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို လျော့ချပေးဖို့ရန်အတွက် ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးတော့ အနီးကပ်ဆုံး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ပြန်တင်ပေးဖို့။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ မတင်ခင် ဆက်ကြား သူတို့လေ့လာသုံးသပ်နေတဲ့အချိန် ဆက်ကြားမှာလည်းပဲ ဈေးနှုန်း တိုးမြှင့်ခြင်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
“လာဖြေတဲ့သူက ဒုဝန်ကြီးဖြစ်နေတော့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရဌာနကို ပြန်တင်ပြပြီးတော့ ဒါကို အချိန်မီ ကျနော်တို့ကို ပြန်လည်တင်ပြမယ်လို့ ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။”
“ဟုတ်တယ်။ မတိုးပါနဲ့အုံး။ ခင်ဗျားတို့ ဒါတွေကို ပြန်စိစစ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့တတွေ သုံးတာ ဆွဲတာတွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုမှ မရှုံးနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်အဆိုကိုထောက်ခံတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တယောက်က ထောက်ပြတယ်။ ဒီဘတ်ဂျက်စာအုပ်တွေ ကြည့်ရင် မနှစ်ကအထိ ရှုံးတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အမြတ်တွေချည်းပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ထောက်ပြလိုက်တယ်။ သူတို့က ၁၈၈ ဘီလျံလောက် ရှုံးနေလို့ တိုးရတာပါလို့ ပြောတာကိုး။ တကယ်တော့ အခုအချိန်အထိ မရှုံးသေးဘူး။”
ဒီနေ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြောလိုတာရှိရင် ပြောပေးပါ။
“သူတို့က မီတာခ တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ခြေ ပြည်သူမှာကတော့ ကောင်းကောင်း ခံစားသွားရတာပေါ့။ ပြည်သူတွေခံစားရတာကို လျစ်လျူရှုလုပ်တဲ့ သဘောမျိုးလည်း ပါတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့အဆိုမှာ သူတို့ပြောတာက အမျိုးမျိုး သူတို့ လေ့လာတယ်ပေါ့။ အစိုးရကလည်း ရှုံးနေလို့ပေါ့။ တကယ်တော့ အစိုးရက အခုထိ မရှုံးသေးဘူး။ ရှုံးတယ်ဆိုတဲ့ အလားအလာဖြစ်နေတာကလည်း ဥပမာ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်။ လစာတွေ အများကြီး ယူထားတယ်။ အဖွဲ့ကြီးတဖွဲ့ဆိုပြီး သီးသန့်လုပ်ထားတယ်။ ပထမရည်ရွယ်ချက်က အစိုးရငွေတွေ မကုန်ဘဲ လုပ်မယ်ဆိုပြီး။ အခုလည်း အစိုးရကို မှီနေတာပဲ၊ ဒီစရိတ်တွေက တက်နေတာပေါ့။ ထို့နည်းတူစွာပဲ ပရောဂျက်တွေ လုပ်တယ်၊ အဲဒါတွေကို အသေအချာလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီထက်မက သက်သာနိုင်တယ်။”
“နောက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားက ထုတ်လွှတ်တဲ့ လျှပ်စစ်တွေက နယ်မြေအနှံ့ ဖြန့်ပြီး ပေးဖို့ကတော့ သူတို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က စီမံကိန်းကျကျ၊ စီမံချက်နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်း ဖြေရှင်းသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
လျှပ်စစ်မီတာခ တိုးမြှင့်မည့်အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းရေး လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေး
လျှပ်စစ်မီတာခတွေ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ့် အစီအစဉ်ကို ပြည်သူတွေက ကန့်ကွက်နေကြတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီိးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေနဲ့ အဲဒီအစီအစဉ် ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပြီး လာမယ့် အစည်းအဝေးမှာ ပြန်လည်တင်ပြဖို့ ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ မလှိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က လျှပ်စစ်မီတာခတွေ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို ပြန်လည်တင်ပြဖို့ အရေးကြီးအဆိုအဖြစ် တင်သွင်းခဲ့တာပါ။
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ လတ်တလော တိုးမြှင့်ကောက်ခံဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်မီတာခဈေးနှုန်းကို စိစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို ပြန်လည်တင်ပြသွားမယ်လို့ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးအောင်သန်ဦးက လွှတ်တော်မှာ အခုလိုပြောသွားပါတယ် ။
“၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းသော ပြည်သူတွေအတွက်ကို စဉ်းစားပြီးတော့မှ သင့်တော်သောဈေးနှုန်းကို အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ ပြင်ဆင်ဖို့ရာ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ သို့သော်လည်း ပြင်ဆင်ဖို့ ကြေညာတဲ့အပိုင်းမှာ လိုအပ်ချက်ကလေးများ၊ အချိန်ယူခြင်းများ အနည်းငယ် အားနည်းချက်ရှိသွားတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ အဆိုတင်သွင်းတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်တင်ပြသုံးသပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
လျှပ်စစ်မီတာခံတိုးမြှင့်တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို တရားမ၀င် စီတန်းလည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ( ၁၈ ) နဲ့ အရေးယူနေတာတွေဟာ ရေရှည်အတွက်မကောင်းသလို၊ သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ ဥပဒေပြုရေးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်က ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ဦးရွှေမန်းကလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။
တစ်နာရီ ၁၉၉ မိုင် နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နေတဲ့ ဟိုင်ရန် တိုင်ဖုန်း မုန်တိုင်းဟာ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို သောကြာနေ့က ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး မနီလာမြို့ကို ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်သွားပါတယ်။
ဟိုင်ရန်ဟာ ကုန်းတွင်းကို ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်ဖူးသမျှ မုန်တိုင်းတွေထဲမှာ စံချိန်တင် အင်အား ပြင်းထန်တဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီမုန်တိုင်းကြောင့် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံ ပြည်နယ်ပေါင်း ၂၀ က လူတစ်သန်းကျော်ဟာ နေအိမ်တွေကနေ ဘေးကင်းရာကို အရေးပေါ် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီး ယခုအချိန်ထိ လူလေးဉီး သေဆုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲက နှစ်ယောက်ဟာ မုန်တိုင်း တိုက်နေစဉ်မှာ မတော်တဆ ဓာတ်လိုက် သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ဉီးကတော့ မိုးကြိုး ထိမှန် သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။
မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းရာ လမ်းကြောင်း တလျှောက်မှာ လေပြင်းဒဏ်ကြောင့် နေအိမ်ခေါင်မိုးတွေ ပြုတ်ထွက် လွင့်ပါတာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုင်တွေ ကျိုးပဲ့ပြီး ဓာတ်အားလိုင်းတွေ ပျက်စီးတာ၊ သစ်ပင်တွေ ပြိုလဲတာ စတာတွေလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နေအိမ်ခေါင်မိုးက သွပ်ပြားချပ်တွေဟာ ကောင်းကင်မှာ ကစားစရာ စွန်တွေလိုပဲ ဝဲပျံနေတယ်လို့ မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
အသေအပျောက်နဲ့ အပျက်အစီး စာရင်း အတိအကျ ကိုတော့ ရက်အနည်းငယ် ကြာမှ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ လေယာဉ်နဲ့ သဘောခရီးစဉ်တွေကို ဖျက်သိမ်းထားပါတယ်။ ဆေးရုံနဲ့ စစ်တပ်ကလဲ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ စတင်ဖို့ အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အခု သတင်း တင်ဆက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဟိုင်ယန် မုန်တိုင်းဟာ အားပျော့သွားပြီ ဖြစ်ပြီး ပြင်းအား အဆင့် ၃ ရှိတဲ့ မုန်တိုင်း အဖြစ်နဲ့ ဗီယက်နမ် ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့ မိုးလေ၀သ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း မြန်မာပြည်ကို မဖြတ်ဟု မိုးဇလပြော
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ တိုက်ခတ်နေတဲ့ အင်အားပြင်း စူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာ လတ်တလောအနေအထားအရတော့ မြန်မာပြည်ဘက် လာဖို့မရှိသေးဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒဌာနက ပြောပါတယ်။
ဟိုင်ယန်အမည်ရှိတဲ့ စူပါ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြို့တော် မနီလာ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃၇ လောက်ဝေးတဲ့ ဆမာကျွန်းကမ်းရိုတန်ကို တနာရီ ၁၉၅ မိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ ဒီနေ့ တိုက်ခတ်သွားတာပါ။
ဒီမုန်တိုင်းဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဘက်ကို ဦးတည်နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို လာဖို့ မရှိဘူးလို့ မိုးလေ၀သနဲ့ ဇလဗေဒဌာန ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးချစ်ကျော်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရထားတဲ့ ပုံအရ မြန်မာနိုင်ငံ မပါဘူး။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းကို ဖြတ်မယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၁၁ ဗီယက်နမ် ကမ်းရိုးတန်း အလယ်ပိုင်းကို ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အထိပဲ ကျနော်တို့ တွေ့သေးတယ်။ ဟိုချီမင်းကိုဖြတ်ရင် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက် မိုးရွာနိုင်တယ်။ အဲဒီထဲက ကွဲထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၂ ပိုင်းပြတ်သွားမယ်။ ၁ ပိုင်းက မြောက်ဘက်ကိုသွားပြီး ၁ ပိုင်းက အနောက်တောင်ဘက်ကို ဆင်းသွားမယ်။ အခုလောလောဆယ် ဖိလစ်ပိုင်ကို ဖြတ်နေတယ်၊ ၁၂ ရက်နေ့လောက်ဆို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်နားကို ရောက်မယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကို လာဖို့တော့ မရှိဘူး။ ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ရင်တော့ ကျနော်တို့ အလေးထားရမယ်။ ခန့်မှန်းချက်က လွဲရင်လည်း လွဲနိုင်တယ်။ အောက်ဆိုက်ပြီးတော့ ဖြတ်ရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သတိထားရမယ်။”
ဖိလစ်ပိုင်က လာတဲ့သတင်းတွေမှာတော့ မုန်တိုင်းကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၃ ဦးသေဆုံးပြီး လေပြင်းတွေကြောင့် သစ်ပင်တွေ အမြစ်က ပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီး လူနေအိမ်တွေလည်း ပြိုကျ ပျက်စီးကုန်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါဟာ ဒီနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအချိန် ရရှိတဲ့အခြအနေဖြစ်ပြီး လူထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေအတွက် တွေ ထပ်တိုးလာနိုင်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် အင်အားပြင်းမုန်တိုင်း ၂၀ လောက် တိုက်ခတ်လေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး အမေရိကန် မိုးဇလဌာနရဲ့ အပြောအရတော့ ခုတိုက်ခတ်နေတဲ့ ဟိုင်ယန်မုန်တိုင်းဟာ ကမ္ဘာမှာ စတုတ္တ အင်အားအပြင်းဆုံး မုန်တိုင်းတွေထဲက တခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆုတွေများစွာ သယ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံပြိုင်ပွဲမှာတော့ အလှဆုံးမယ် (Best Bikini Body) သုံးယောက် ရွေးချယ်ရာမှာ
တစ်ယောက် အပါအ၀င် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
"ဆုရယ်လို့တော့ အခုထိ မကြေညာသေးပါဘူး။ အခုထိကတော့ မိုးစက်ဝိုင်က နောက်ဆုံးဆန်ခါ
တင်အဆင့်တိုင်းမှာ ပါဝင်နေတာပါ။ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ အလှဆုံးမယ်မှာ မစ္စဖိလစ်ပိုင်၊ မစ္စယူအက်စ်
တို့နဲ့အတူ အလှဆုံးမယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ"လို့ မယ်စကြ၀ဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကို စီစဉ်ကျင်းပ
ခဲ့တဲ့ ဟယ်လိုမဒမ်မီဒီယာမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုချမ်းလင်းသူက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဆုတစ်ဆုဖြစ်တဲ့ Miss Photogenic ဆုအတွက် ကိုတော့ မဲပေးစနစ်နဲ့
ရွေးချယ်ရာမှာ မိုးစက်ဝိုင်က နံပါတ်(၈)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး တခြားအွန်လိုင်းကနေ မဲပေးလို့
ရတဲ့ ဆုတွေမှာတော့ ထိပ်ဆုံးမှာ ရောက်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာ မိုးစက်ဝိုင် ထိပ်ဆုံးမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အင်တာနက်ဆုတွေကတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက
အစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Beauty Pageant Grand Slam People's Choice Award၊ Missosology
People's Choice Award၊ Pageantology People's Choice Award တို့ဖြစ်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံက
ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ပရိသတ်ရွေးချယ်တဲ့ ဆုမှာလည်း ထိပ်ဆုံးမှာ
ရပ်တည်နေတယ်လို့ ကိုချမ်းလင်း သူက ပြောပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲကြီးကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွား မှာဖြစ်ပြီး မဲပေးတာ
ကိုတော့ ၈ ရက်နေ့ အထိ လက်ခံသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်းစုံက အလှမယ် ၈၆ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ဒီအလှမယ်ပွဲကြီးဟာ မိုးစက်ဝိုင်တစ်ယောက်
ဘယ်ဆုတွေသယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာမလဲဆိုတာကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွင်မာထွန်း - မြန်မာတိုင်း(မ်)
စိတ်ကြွဆေး အပါအ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေ ဖမ်းဆီးရရှိမှုဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိသိသာသာ ပိုများလာခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားတာပါ။ ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေနဲ့ စိုက်ပျိုးဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ ဧရိယာဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲ ပိုများလာခဲ့ရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကစလို့ အမြင့်ဆုံးအထိ ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း UNODC ကပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ၁၀၀ခန့်ကွာဝေးတဲ့ ပထုံဌာနီမြို့နယ်ထဲက ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကို သန့်စင်တဲ့ စက်ရုံတခုထဲမှာ ရောင်းစားခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၆ဦးကို ထိုင်းအစိုးရ လူကုန်ကူးမူတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ အဖွဲ့က ပူးပေါင်း ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအခြေစိုက် ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံထဲကို လူပွဲစားတွေက အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေရမယ်ဆိုတဲ့ မက်လုံးတွေနဲ့ ဘုရားသုံးဆူ၊ ပဲခူး၊ ရန်ကုန်၊ ဘီလင်း ကျိုက်ထိုစတဲ့နေရာ အသီးသီးကနေ လာကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ကျော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ ထိုင်းလူကုန်ကူးမူတိုက်ဖျက်ရေးရဲတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာဦးကျော်သောင်းက ဆိုပါတယ်။
"အဓိက မထွက်ပြေးအောင်ပေါ့နော်။ ထွက်ပြေးရင် လျှပ်စစ်ထိပြီးတော့၊ လျှပ်စစ်က ဝင်းအပြည့်မှာ အကုန်လုံးလွှတ်ထားတာ။ လျှပ်စစ်စီးတာက အမည်းရောင် အဲ့ဒီ့အစိမ်းရောင်ကို သွားထိရင် လျှပ်စစ်ထိတယ်။ အဲ့ဒီ့ကြိုးအနီကို ထိရင် လျှပ်စစ်မလိုက်ဘူး။ အဲ့လိုမျိုး။ ခြံစည်းရိုးပတ်ပတ်လည် သွယ်ထားတာဗျ။ ကျနော်တို့ အခန်းဘေးမှန်သမျကို သွယ်ထားတယ်။ မိန်း မချထားဘူး။ ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင် ရှော့ခ် လိုက်မယ်ပေါ့။ အဲ့လိုမျိုး တားထားတာ၊ အဲ့စက်ရုံ၊ အမှိုက်ရုံကြီးက ကြာပြီ။ အဲ့အမှိုက်တွေထဲက ရတဲ့ကော်တွေကို ရွေးယူတယ်။ ယူပြီးတော့ စက်နဲ့ပြန်ကြိတ်တယ်။ ကြာကြာနေတော့ လူက လုပ်မနိုင်ဘူး။ ဖျားတယ်။ နာတယ်။ အဲ့လို ဖျားလို့ နာလို့ တရက်နားလို့ဆိုရင်လည်း တရက်စာ ဖြတ်တယ်။"
ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲက အမျိုးသမီးတဦးကတော့ အခုလိုပြောပြပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူကနေ တဆင့် လူအုပ်စုတွေ လာကြတဲ့အခါမှာပွဲစားတွေက သူတိုတွေကို ကားတွေထဲ ဖွက်ပြီး သယ်ဆောင်လာပုံကိုလည်း လွတ်မြောက်လာသူတဦးကပြောပြပါတယ်။
"ပုလင်းကားလေ၊ ဘုရားသုံးဆူဆင်းတဲ့ကား၊ ဒါပေမဲ့ အလွတ်ပဲ ပုလင်းတွေပါတယ်။ အရည်တွေ မပါတော့ဘူး။ အဲ့တာအပြည့်ပဲ။ ကားခေါင်း ဒီဘက်နည်းနည်းကျော်လာရင် အခန်းတခန်းလုပ်ထားတယ်။ အခန်းထဲမှာ လူ၁၀ယောက်၊ ၁၂ယောက် ထားလို့ရတယ်။ အသက်ရူကျပ်တယ်ဗျ။ အန်တဲ့သူအန်၊ မူးတဲ့သူ မူး၊ ကျနော်တို့ မက်တပ်ရပ်တဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ ပန်ကာထားထားပေးတယ်။ အဲ့ဒီ့အခန်းကို အကုန်လုံးချပြီး ရှာမှ တွေ့နိုင်မယ်။"
အလုပ်ရှင်သူဌေး လင်မယား ၂ဦးနဲ့ မြန်မာပွဲစား ၃ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် မြန်မာ၂၆ဦးနဲ့အတူ လာအိုနိုင်ငံသား ၂၄ဦးလည်းလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇင်ဝိုင်း ကျန်းမာရေးကြောင့် အနားယူပြီး ဦးလူမင်း ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူမည့် အကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အကယ်ဒမီ လူမင်းဟာ လက်ရှိ အနေအထားအရ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ နေရာတခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိထားသလို၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာလည်း ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကယ်ဒမီ လူမင်းကို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အပြင် သူ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အစ်ကိုတို့ တိုင်းပြည်မှာ အကူးအပြောင်း ကာလတခုကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်ဖြတ်နေရသလိုပဲ၊ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ကလည်း ကာလတလျှောက်လုံးမှာ လုပ်ရကိုင်ရ အခက်ဆုံး ကာလတခုကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တက်ညီလက်ညီနဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်သွားနိုင်ရင် ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ အခြေ အနေထက် ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်တခု ကလည်း ရှိနေတယ်။ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အခွင့်အရေးတွေ အစ်ကိုတို့ လက်ထဲကို ရောက်လာမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ၊ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ရှေ့ရေးဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် မတွေးနိုင်ဘဲနဲ့ လက်တလော ပြဿနာတွေကိုပဲ ထိုင်ရှင်းနေရင်း အချိန်ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမှာပဲ။
မေး။ ။ ကိုလူမင်းတို့လို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ အဓိက ပြောင်းလဲရမယ့် အချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဥပဒေမှာရော ဘယ်လို အချက်တွေ ပါဝင်စေချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ အခု အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် တိုင်းပြည်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အကျယ်လောင်ဆုံး အသံဆိုပြီး ဖြစ်လာ သလိုပဲ ကိုယ်တို့ဆီမှာလည်း အကူးအပြောင်း ကာလတခုဖြစ်တဲ့အတွက် အစ်ကိုတို့ လောကအတွက်၊ ရုပ်ရှင် ဥပဒေဆိုတာ ပေါ်လာဦးမယ်။ ပေါ်လာမယ့် ဥပဒေက အစ်ကိုတို့ လောကအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အကာအကွယ်ပေးသလဲ၊ဘယ်လောက်အထိ ဦးဆောင် ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စက အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။ ဥပဒေ အကြောင်းအရာ ကတော့ တထိုင်တည်း ပြောလို့မရဘူး။ အစ်ကိုတို့လို လောကအပေါ် စေတနာပဲရှိပြီးတော့ ဖြစ်စေချင်တာချည်းပဲ ထိုင်ပြောလို့ မရဘူး။ ဥပဒေ အကြောင်းအရာ နားလည်သူတွေနဲ့ အစ်ကိုတို့ ဖြစ်ချင်တာကို ရုပ်ရှင်လောက အနာဂတ်အတွက် ကောင်းမယ့် ဟာတွေကို လောကသားတွေ အားလုံး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ အဲဒီအချက်အလက် တွေကို ချရေးရမှာပေါ့။
ဖြေ။ ။ အခုကတော့ လူတစု သို့မဟုတ် တယောက်၊ တဖွဲ့ကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမြင် မကြည်တာတွေ၊ မကျေနပ်တာတွေ ရှိရင် သမ္မတ အထိ တိုင်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီလို တိုင်တဲ့ အခါမှာလည်း သမ္မတ ရုံးကနေ စပြီးတော့ တိုင်တဲ့အပေါ်မှာ ပြန်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေး ရတာတွေ ရှိတယ်။ ပြီးတော့ တချို့ကိစ္စ တွေက မလိုအပ်ဘဲ အချိန်တွေကုန်ပြီး ခေါင်းစား ရတယ်။ ကိုယ့်လောက တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း အတွက် လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ၊ အချိန်တွေဟာ အဲဒီအတွက် ပေးနေရတာ အခုအချိန်မှာ အစ်ကို အနှမျောဆုံးပဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ အစည်းအရုံးအနေနဲ့ ၀င်ပြီး သတ်မှတ်လို့ ရတဲ့ အရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တို့က အနုပညာ ဆိုပေမယ့်လည်း စီးပွားရေးနဲ့ ဆက်နွှယ်တဲ့ အနုပညာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒါက ဈေးကွက်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်သူ တွေရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကာလ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရုပ်ရှင် လုပ်ငန်းမှာလည်း နိုင်ငံခြား ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု ဝင်လာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ လုပ်စေချင်သလဲ၊ ဘယ်လို အပိုင်းတွေမှာ ပါဝင်စေချင်သလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုတဲ့ FDI Law ကတော့ ထွက်သွားပြီဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘီလီယံ ၅၀ ကျော် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် အစ်ကိုတို့ အနုပညာ လောကကို၊ ရုပ်ရှင်လောကကို ရင်းနှီး မြှုပ်မှုတွေက ၀င်မလာ သေးဘူး။ ၀င်လာတဲ့ အခါကျရင် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ပြည်တွင်း အနုပညာရှင်တွေ အတွက် ဘယ်လို အခွင့်အရေး ရှိမလဲပေါ့။ အဲဒါမှ မဟုတ် အစ်ကိုတို့တတွေ အားလုံးဟာ ဘေးဖယ် ပေးလိုက်ကြရမှာလား။ အဲဒါမျိုးတွေ အရေးကြီးပါတယ်။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေးဆိုကတည်းက ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ အားလုံးရဲ့ အရေးပဲ။ တချိန်တုန်းကတော့ နိုင်ငံရေး လုပ်တဲ့သူကို အသွေးအရောင် ရှိတဲ့ လူလို့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဘယ်သူမှ မလုပ်ရဲအောင်၊ မပြောမဆို ရဲအောင် ဖိနှိပ် ထားခဲ့တာလေ။ အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်း အားလုံး အရေးပဲ။ အစ်ကိုတို့ အနုပညာရှင် တွေကလည်း ဒီနိုင်ငံထဲက ဒီနိုင်ငံသားတွေပဲ။ ပိုပြီးတော့တောင် အရေးကြီး သေးတယ်။ ပြည်သူတွေ၊ ပရိသတ်တွေ အပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဆိုတော့ ပိုတောင် အရေးကြီးသေးတယ်။ တချိန်တုန်းက အစည်းအရုံးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အနုပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပါတီ နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမယ် ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေ ရှိတယ်။ အခုအချိန်မှာ အဲဒါတွေ မရှိတော့ဘူး။ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပါတီ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ လူကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
မေး။ ။ ကိုလူမင်း အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ဘာတွေများ ဖြည့်စွက်လုပ်စေချင်တာ ရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါလည်း ပြောချင်တယ်။ အစ်ကိုက အမေစု (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ဘက်ကို လိုက်ပြီးပြောတဲ့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အနေနဲ့လည်း တော်တော် လုပ်ရကိုင်ရခက်တဲ့ အနေအထားတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းလည်း နည်းနည်း စာကြည့်ပါလို့၊ လူတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ များတဲ့အခါ၊ ကြံ့ကြာမှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အားမလို အားမရတွေ ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ လူတယောက်ဖြစ်တယ်၊ နတ်သမီး မဟုတ်ဘူး၊ ဖန်ဆင်းရှင် မဟုတ်ဘူး။လူ တယောက်ရဲ့ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း ရှိသမျှပဲ ကြိုးစားနိုင်မယ်။ သူ ကြိုးစားသမျှလည်း သူ့အတွက် တခုမှမပါဘူး။ကိုယ့်တိုင်းသူ ပြည်သားတွေ အတွက်ပဲ။ အစ်ကိုကတော့ အမေစုကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်တယ်။ ထောက်ခံတယ်။
ဖြေ။ ။ အစ်ကို ပြောချင်တာ အဲဒါပဲလေ။ ရုပ်ရှင် လောကသားတွေ တကယ်ပူရမှာ အဲဒီ ကိစ္စပဲ။ အာဆီယံ တိုင်းပြည်တွေ အတွင်းမှာ ကုန်သွယ်ရေးတွေတောင် တပြေးညီ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ရုပ်ရှင် လောကကြီးကလည်း မူတွေ၊ စနစ်တွေ အကုန် ပြောင်းရတော့မယ်။ အဲဒီ အခါကျရင် ငါတို့ ဘယ်လို ရပ်တည်ကြရမလဲ၊ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြရမလဲ ဆိုတာ အခုကတည်းက လောကသား အားလုံး စည်းလုံး တိုင်ပင်ကြရမယ့် အချိန်။ အဲဒီမှာ အချင်းချင်း ပုခုံးတိုက်တာ လောက်ကို ရန်ပွဲတွေ လုပ်နေရင်တော့လည်း အဲဒီ အချိန်ကျရင် စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။
ဖြေ။ ။ လူငယ်တိုင်း လမ်းမှားရောက်တယ် လိုတော့ သိမ်းကြုံးပြီး မပြောချင်ဘူး။ လူငယ်တွေက အစ်ကိုတို့ထက် နည်းပညာ တွေကို ပိုပြီးတော့ ကျွမ်းကျင်တယ်၊ လက်တွေ့ကျကျ သိတယ်။ အစ်ကိုတို့ထက် သွက်လက် ထက်မြတ်တယ်၊ အတွေးအခေါ် တွေ ရဲရင့် ပြတ်သားတယ်၊ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ လူငယ်တွေမှာ အများကြီး ရှိတယ်။ တချို့တလေ မှာတော့ မကောင်းတာ ရှိကောင်း ရှိမယ်။ တခါတလေ ကျတော့လည်း ကလေးတွေမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး၊ သူတို့ ပျက်စီး နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတာကလည်း ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ တာဝန်တွေလည်း မကင်းပါဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
မေး။ ။ အကယ်ဒမီ ပေးမယ့်အချိန်ကလည်း နီးနေပြီ၊ အရင်နှစ်က တရုတ်ကားကို ကော်ပီ ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ကားကို အကယ်ဒမီ ပေးလိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ ကိုလူမင်း အနေနဲ့ ဆုရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ကို ဘယ်လိုအကြံ ပေးချင်သလဲ။
ဖြေ။ ။ အကယ်ဒမီ ဆိုတာက အစ်ကိုတို့ အစည်းအရုံးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ အစည်းအရုံး ကလည်း ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ အကယ်ဒမီ ရွေးချယ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ကလည်း ၀ါရင့်သဘာရင့် အများလေးစားရတဲ့ အနုပညာရှင်၊ အတက်ပညာရှင် ကြီးတွေက အချိန် ပေးပြီး စိစစ် အကဲဖြတ်ပြီး ရွေးချယ်ပေးတာ။ အဲဒီ အပေါ်မှာ ဆုတဆု ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အငြင်းပွားမှုတွေ ကတော့ ရှိမှာပါပဲ။
မေး။ ။ ဒီနှစ် အကယ်ဒမီ တစ်ပြေးကား စာရင်းထဲမှာ ကိုလူမင်း ကားလည်း ပါတယ်နော်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကိုလူမင်း အနေနဲ့ ဘယ်လို မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိသလဲ။
ဖြေ။ ။ အစ်ကိုကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီအကယ်ဒမီပွဲကြီး ကိုပဲ ဘယ်လို အမှားနည်းအောင်၊ ဘယ်လို အားနည်းချက် တွေကို ရှာပြီးတော့ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာပဲ အစ်ကို စိတ်တွေ ပူနေ တာပါ။
မေး။ ။ ကိုလူမင်း အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တဲ့စကားနဲ့ လက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်နဲ့ ဗီဒီယိုလေး တကား ရိုက်နေပါတယ်။ ပရိသတ် ကတော့ အစ်ကို့ရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အားပေးနေကြပဲ။ အစ်ကို ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်တွေ များပါစေ ပရိသတ်ရှေ့ တင်ပြလာမယ့် ကားတွေကို အနုပညာ ဇွဲတွေ မလျှော့ဘဲ လုပ်သွားမှာပါလို့ …၊ ပရိသတ်ကြည့်ရင် သိနိုင်မှာပါ။
မြန်မာ ယူ၁၉အသင်း ဗိုလ်လုပွဲတက်သွားပြီ ပရိသတ်အပေါင်းတို့
မမျှော်လင့်ထားတဲ့သတင်းပါပဲ၊ မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်းက မလေးရှား ယူ
၂၃ အသင်းကြီးကိုနိုင်ကာဗိုလ်လုပွဲတက်သွားပြီတဲ့။ယနေ့ ( နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ )ညနေ(၄)နာရီမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ အိုလံပစ် အားကစားကွင်းတွင် BIDC Cup 2013 ဆီမီးဖိုင်နယ် ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ် မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်းနှင့် မလေးရှား ယူ၂၃ အသင်း(ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ လာကစားမယ့် အသင်း)တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာ မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်းက (၁)ဂိုး၊ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရသွား ပါတယ်။ ဆီးဂိမ်းစ်မှာလာပြိုင်မယ့် မလေးရှား
၂၃ အသင်းကြီးကို အနိုင်ယူပြီး မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်း ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်သွားခြင်းကြောင့် (ကိုယ့်ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ အသင်းအနိုင်ရခြင်းဖြစ်ရုံမကမြန်မာယူ၂၃ ရှုံးကြွေးကို ယူ၁၉ ကချေလိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်လို့ )မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တို့နဲ့ တကွပေါ်ပြူလာအနေနဲ့ လည်းဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြရပါတယ်။
(ပုံကတော့ BIDC Cup 2013 ပွဲစဉ် မြန်မာ ယူ၁၉ အသင်းနှင့် ဗီယက်နမ် ယူ၂၂ အသင်းတို့ ပွဲနေ့ )
(1) How joyful! ၀မ်းမြောက်လိုက်တာကွာ။
(2) Marvellous! အံ့မခမ်းပဲနော်..။
(3) Done wonderfully! လုပ်ထားတာ ကောင်းလိုက်တာ။
(4) Excellent! ကောင်းမှကောင်းကွာ။
(5) How sweet! ချိုသာလိုက်တာ..။
(6) How lovely! ချစ်စရာလေး။
(7) Whatasurprise! အံ့သြသွားတာပဲ။
(8) Wonderful! ကောင်းလိုက်တာကွာ။
(9) Congratulations! ဂုဏ်ယူတယ်ကွာ..။
(10) Whatawonderful idea! တယ်ကောင်းတဲ့ အကြံညဏ်ပဲ။
(11) Oh! No! အိုး..မဟုတ်ရပါဘူး။
(12) How bad! ဆိုးလိုက်တာ။
(13) How terrible! ဆိုးပါ့ကွာ..။
(14) How disgraceful! ဆိုးလွန်းပါတယ်။
(15) How absurd! အဓိပွါယ် မရှိလိုက်တာ..။
(16) Whatashame! ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ။
(17) Whatanonsense! တောက်တီးတောက်တဲ့ကွာ။
(18) How disgusting! မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာ။
(19) Whatapity! သနားပါတယ်နော်။
(20) How tragic! ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းလိုက်တာ။
(21) O God! ဘုရားရေ။
(22) My God! ဘု၇ား..ရေ။
(23) Oh my God! ဘုရား..ဘုရား။
(24) Good Heavens! ။
(25) By God's grace! ။
(26) For goodness' sake! ဘုရား..ဘုရား
(27) Thank Goodness! တော်ပါသေး။ဘုရားမလို့။
(28) My Goodness! , Goodness me! , Goodness gracious(me)!
(29) God Almighty! , God in heaven! ,Good Heavens!, Good God! Oh (my) God! =ဘုရား..ဘုရား၊ ဘုရားရေ
(30) To God/ Goodness/Heaven! ဘုရားသိကြား မလို့....
(31) And how! ဟုတ်ပါ့..မှန်လိုက်လေ။
(32) Well I never! ဟုတ်ပါ့..ငါ ထင်တောင်မထင်ဘူး။
(33) Just imagine! စဉ်းစားလဲ ကြည့်ပါဦး
(34) What the dickens is that! ဘာများပါလိမ့်။
(35) Great Scott! အမလေး။
(36) Look's who's here! ဟေ့ဒီမှာဘယ်သူလဲ ကြည့်စမ်း။
(37) Absolutely delightful! သိပ်ကို ကောင်းတာပေါ့ဗျာ..။
(38) Whatanasty weather! တယ်ဆိုးတဲ့ ရာသီဥတုပဲ။
(39) Cool! မိုက်တယ်ကွာ။
(40) Lots of luck! ကံကောင်းကြပါစေ။
နေ့စဉ်သုံး English Dictionary & Myanmar Definitions
တစ်နေ့မနက် စောစောပိုင်းမှာ မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်သည့် အစ်မကြီး တင့်နှင်းထက်၏ ဖုန်းဆက်လာချက်အရ ကျွန်ုပ်၏ လုပ်လက်စ အလုပ်များကို ရောက်သည့်နေရာမှာ လက်စသတ်ကာ ရန်ကုန်မြို့တော် စမ်းချောင်းအရပ်နေ အိမ်အနီး ပဒုမ္မာလမ်းရှိ ချစ်တီးစား သောက်ဆိုင် ရွှေမြို့တော်သို့ ကြွချီတော် မူခဲ့ရပါပေတော့၏။အစ်မကြီး တင့်နှင်း ထက်မှာ ယခု အခါ ယခင်ကထက် ပွင့်လင်းမြင်သာ လာပြီဖြစ်သည့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဝန် ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွင်းမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါ ဝင်ဆောင် ရွက်နေ သူဖြစ် ကာ နိုင်ငံတကာခရီးသွားများ အတွက် ထက်ထက်သန်သန် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေ သူတစ်ဦးဖြစ်ပါ ၏။ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည် တွင်းအနှံ့ဒေ သပေါင်းစုံသို့ ခြေ စကြာ ဖြန့်နေရခြင်းများမှ တစ်ခါတစ် ရံ အနားရသည့်အခါ ‘စာဆောင်းပါး’ တွေလည်းရေးနေသူဖြစ်ကာ ယခုကျွန်ုပ် ထံသို့ဆက်သွယ်လာ သည်မှာလည်း နိုင် ငံတကာနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုအတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါပေ၏။
ကျွန်ုပ် ‘ရွှေမြို့တော်’စားသောက် ဆိုင်သို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ ‘ပါရမီ’လမ်း မှလာရောက်သည့်အစ်မတို့မှာ မရောက် ရှိသေးပါ။ သည့်နောက် အစ်မတို့၏ မော်တော်ယာဉ် ပဒုမ္မာလမ်းသို့ ဆိုက် ရောက်လာသည့်အခါ ရှေးဦးစွာ ရှေ့ခေါင်း ခန်းမှအစ်မဆင်းသက်လာပြီး အနောက် ခန်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဆင်းသက်လာတာ တွေ့ရပါပေ၏။
”မင်္ဂလာပါဆာသော်ဒိုးရေ။ ဟော ဒါက မစ္စတာ တကေရှိကူဒိုတဲ့”
”မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ချွန်ဒေါ် တကေရှိကူ ဒိုပါ… တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်”
”မင်္ဂလာပါ တကေရှိကူဒို။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်ုပ် ဆာသော်ဒိုးပါ” ”အခုလို အချိန်ပေး လာရောက်တဲ့အ တွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အာရိဂတ် တော”။
”တွေ့ရဆုံရတာ ဝမ်းမြောက်ပါ တယ်ခင်ဗျာ.. ဆိုင်ထဲကို ကြွပါ။”
အကြောင်းရင်း ကိစ္စကား အခြား မဟုတ်ပါ။ ‘ကာတွန်း’နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကို လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းသာ ဖြစ်ပါပေ၏။ မိတ်ဆွေကြီး တကေရှိကူ ဒိုမှာဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို မှာနေလိုက်၊ တရုတ် ပြည်မှာ နေလိုက်ဖြစ်ကာ Animation Movie Game Art လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ပရိုဂျူဆာတစ်ဦး ဖြစ်ပါပေ၏။ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာ၏ စိတ်ဝင် စား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဂိမ်းမဟာ များနှင့် ခရီးဆောင် မိုဘိုင်းဖုန်းတို့အထဲ တွင် အပျင်းပြေကစားစရာဂိမ်းတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖန်တီးဖော် ဆောင်ရေးဆွဲဖို့ရာ လာရောက်ကွင်း ဆင်းလေ့လာ စနည်းနာခြင်း ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်ထံမှလည်း သိလိုသမျှ အဝဝကို မေးမြန်းဖို့ရာ ဖြစ်ပါပေ၏ခင်ဗျာ။
လက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ‘ကာတွန်း’မဂ္ဂဇင်း သီးသန့် ရှိ၊ မရှိ၊ နိုင်ငံသားတွေ ‘ရုပ်ပြကာတွန်း’ ဖတ်ရှုမှုနှုန်း တိုးတက်မှု ဆုတ်ယုတ်မှု၊ ရပ်ကွက်များ အတွင်း ကွန်ပျူတာ ဂိမ်းစင်တာများ၏ အခြေအနေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းအတွင်း ဂိမ်း ဆော့ကစားခြင်း ရာခိုင်နှုန်း၊ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် သိလိုသမျှမေးမြန်းကာ ကျွန်ုပ် လက်လှမ်းမီသိရှိဖြေဆိုသမျှကို
လည်း သူ၏မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာသေသေ ချာချာကို လိုက်လံရေးမှတ်နေပါပေ၏။ကျွန်ုပ်မှာ ‘ပရင့်မီဒီယာ’များတွင် သာရေးဆွဲသည့်ဘက်ကို ပိုပြီးအားသန် ကာ အနှီလှုပ်ရှား မှုအရုပ် Animation အလုပ်များဘက်မှာ အချို့လုပ်ငန်းများကို အနည်းငယ်လောက်သာ ကူညီရေးဆွဲ ပေးဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း ပြောပြထားပြီး ဖြစ် ပါ၏။ ထိုစဉ်အခါများက ‘မည်သို့မည်ပုံ’ ရေးဆွဲခဲ့ကြ၊ ရိုက်ကူးခဲ့ကြရပုံများကို လည်း သူက သေသေချာချာမေးကာ သေသေချာချာကို ရေးမှတ်နေတာ တွေ့ရပါပေ၏။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင် လာသည့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ် လောက်ဆီက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အိုင် တီပညာရှင်လူငယ်များ ဖန်တီးနေသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်း ဂိမ်းတစ်ခုအတွက် လိုအပ်သည့် ပုံတွေရေးဖို့ ပြောဆိုပြီး နောက်ပိုင်း သူတို့ဘက်မှ ဆက်လက်အပြီးမသတ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် ကိစ္စကိုပါ သူရေးမှတ်ယူနေပါပေ၏။
ကျွန်ုပ်အနေနှင့်မူ ကျွန်ုပ်အပေါ်ယံသိသလောက်သာ ပြောပြဖြစ်ခဲ့ပြီး သကာလ မြန်မာနိုင်ငံရှိ Animation လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်မှုများထဲမှာ ထဲထဲ ဝင်ဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် သူများ ထံ ဆက်သွယ်သွားရောက်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ် လက်လှမ်းမီသမျှ လိပ်စာအဝဝကိုလည်း တကေရှိကူဒိုအား ပေးကာ လမ်းညွှန် လိုက်ပါ၏။
”တကယ်လုပ်နေတဲ့ အဲဒီ Animation တွေဆီကိုသာရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ”။ ”ဆာသော်ဒိုးစံက Animation မဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် ဆာသော် ဒိုးစံရဲ့ ‘အရုပ်’တွေကို ‘လှုပ်’ ပေးလိုက် ရင် အတော့်ကို ကောင်းမှာခင်ဗျ”
ဆိုင်အတွင်းမှာ ၄၅ မိနစ်ခန့်အ ကြာ အမေးအဖြေ လုပ်ပြီးသကာလ ကျွန်ုပ်ကလည်း သူ့ကို မေးချင်ရာရာများ ရှိရာ အနှီကာတွန်းဂိမ်းဘာညာနှင့်မ ဆိုင်ရာနိုင်ငံတ ကာ အခြေအနေ အထွေ ထွေကို မေးဖြစ်မြန်းဖြစ်ခဲ့ပေရာ သူက လည်း တစ်ခါတစ်ခါ ချက်ချင်း တစ်ခါ တစ်ခါ စဉ်းစားတွေးတော ချင့်ချိန်ကာ ဖြေပေးခဲ့ ပါပေ၏။
”အင်း…ဂျပန်ကနေ ဒီမြန်မာ ပြည်ကို လာရတာ အရင်တုန်းကနဲ့ မတူ ဘူး…လုံးဝကို အဆင်ပြေပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါပဲ ဆာသော်ဒိုးစံ”
”အဲ…ဂျပန်ကနေ ဒီကို လာရ တာတော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ ဒီရန် ကုန်ကို ရောက်မှ အဆင်မပြေ ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား”
”ပြေပါတယ် … ပြေပါတယ်။ ဆာသော်ဒိုးစံ..ဘာမှ ပြဿနာမှ မရှိ ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ”
”ဘာဖြစ်လုိ့ ရမလဲ …အခုပဲ ပါရမီလမ်းကနေ ဒီစမ်းချောင်းကိုလာ တာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ တိုးနေ ပြီး ရောက်ချိန်ထက် နောက်ကျမှ ရောက်လာလို့ပါ”
”ဟားဟား…ဟားဟား…ဟားဟား..အဲဒါတော့ ဟုတ်တယ်.. ဟုတ်တယ်”
ဒီတစ်ခေါက်သူ့မှာ အချိန်သိပ်မရ တော့ဘဲ သန်ဘက်ခါ ပြန်ရမည်ဖြစ်ရာ သူရသမျှ အချိန်အတွင်းမှာ ချင်းချောင်း နန်းတော်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပုကျောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု တက္က သိုလ်တို့ကို သွားချင် သည်ဖြစ်ရာ သူ့မှာ ပါလာသည့် ရန်ကုန် မြေပုံကို ထောက်ကာ ထောက်ကာ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ရပါ၏။ ဆိုင်မှ ထသည့်အခါ ရုတ်တရက် ကျွန်ုပ်အိမ် သို့ လိုက်လည်ချင်ကြောင်း ပြောပါ၏။ ကျွန်ုပ်က ဒီဆိုင်နှင့် ကျွန်ုပ် အိမ်မှာ မဝေးကွာလှဘဲ လိုက်လည်လို က လည်နိုင်ပါသော်ငြား ဒီကနေ့မှ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် မီးပျ က်နေကာ နေအိမ်မှာလည်း အထပ်မြင့်ဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းမည်ကို စိုးရိမ်သည်ဟု ပြောလေ ရာ..ကိုရွှေဂျပန် ညီတော်မောင်မှာ ”ကိစ္စမရှိပါဘူး။ လိုက်ပြီး လည်ပါ ရစေ”ဟု ပြော ကာ ပုံရေးတဲ့နေရာတွေ၊ ကွန်ပျူ တာ သုံးတဲ့နေရာတွေ အရှေ့အနောက် ဝရန်တာတွေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုကာ သူ့အားပေးလို့ရသမျှ ပေးဖို့ရာ ကျွန်ုပ်၏ လက်ရာပါသည့် မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တို့ကို တောင်းဆိုလေရာ ကျွန်ုပ်စုဆောင်းပေး လိုက်ပါပေ၏။
ကျွန်ုပ်ပေးသည့် ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း သတင်းစာများကို ကြည့်ရှုနေသည့်အခါ ကျွန်ုပ်က ”သယ်နိုင်လျှင် သယ်သွားပါ .. မသယ်နိုင်တာ ထားခဲ့ပါ”ဟု ဆို လေရာ ‘အကုန်လုံး သယ်ယူသွားမယ်’ ဟု ပြောပါပေ၏။ ဟိုဘက်နှစ်တွေဆီက အိမ်သို့ မျက်စိလည်ကာ ရောက်ရှိလာခဲ့ သည့် နိုင်ငံခြားသားအချို့မှာ ‘နမူနာ’ တစ်စောင်တလေလောက်သာ အနည်း ငယ် သယ်ယူသွားတတ်၍ သူ့အား ဤ စကားပြောရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြ လေရာ တကေရှိကူဒိုကတော့ ‘အကုန် လုံး သယ်ချသွားမယ်’ဟုဆိုကာ သူ့အိတ် ထဲ ထည့်နေပါလေ၏။
”ကျွန်ုပ်၏ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကျွန်ုပ် ၏ သမီးတော် တီးခတ်သည့် မြန်မာ့ စောင်းကောက် တစ်လက်ရှိနေပေရာ သူပိုက်ပြီး စမ်းသပ်တို့ထိပြီးသကာလ ကျွန်ုပ်နှင့် နှစ်ယောက် အတူဓာတ်ပုံရိုက် ရန် သူ့ဖုန်းအား အစ်မတင့်နှင်းထက်ကို ပေးလိုက်ပါ၏။ စောင်းသမား ဂျပန်နှင့် မြန်မာဆာမူရိုင်းဆာသော်ဒိုးစံတို့ ဓာတ် ပုံရိုက်စဉ် ကျွန်ုပ်လည်း စိတ်ထဲ ဖျတ်ခ နဲ ပေါ်လာရာ ‘ဝါကျတစ်ခု’ကို ရုတ်တ ရက် နှုတ်ထွက်ရွတ်ဆိုသမှု ပြုလိုက်ပါ ပေရာ သူလည်း ရုတ်တရက် ဝမ်းသာ သွားပုံရပါပေ၏။
‘နိပွန်..ဘိရုမာ..ဘန်ဇိုင်း.. ဟားဟား …ဟားဟား…ဟားဟား…နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာရင်လည်း ကူညီနိုင်တာ ကူညီပါ ဦး ဆာသော်ဒိုးစံ”
‘ရပါတယ် တကေရှိကူဒို ကြို တင်ပြီးတော့သာ အီးလ်မေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်တာ မှန်သမျှ ကူညီဖို့ အသင့်ပါ။ ကျွန်ုပ် ထက် ထဲထဲဝင်ဝင်
လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေဆီလည်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် စေချင်ပါတယ်”
”ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆာသော်ဒိုး စံ..ခင်ဗျားရဲ့ အရုပ်တွေကိုလည်း ‘လှုပ်’ဖို့ လုပ်ပါ”
”ဒါနဲ့ တင့်နှင်းထက်ရေ..ခင်ဗျား တို့ မြန်မာတွေက သိပ်ကို ကူညီတတ်ကြ တာပဲနော်”
”ဟုတ်တယ် တကေရှိကူဒို…ကျွန်မတို့ လူမျိုးဟာ အဲသလိုပါပဲ”
”အဲ…အကြောင်းမဲ့ ကူညီတာ တော့ မဟုတ်ဘူး။ တကေရှိကူဒိုရဲ့ မောင်ရင်တို့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ခေတ်မီစစ်တပ် ‘ရဲဘော်သုံးကျိပ်’အတွက် အများကြီးကို ကူညီခဲ့တယ် မဟုတ်လား”
ဟားဟားဟားဟားဟား…. ဟုတ်ပါတယ် ဆာသော်ဒိုးစံ”
”အဲဒီအတိတ်က ကျေးဇူးတွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာ အများ ကြီးကို ရှိခဲ့တယ်လေ..ပြီးတော့..ပြီး တော့ …’
”ပြီးတော့..ဘာဖြစ်သလဲ ဆာ သော်ဒိုးစံ”
”ပြီးတော့ ..ဘာဖြစ်ရမလဲဗျ။ အခုလက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ တင်ရှိနေတဲ့ အကြွေးတွေကို လျှော်ပစ် ပေးနေတယ်။ ကျုပ်တို့ နိုင် ငံက ‘ခေါင်း ရှောင်အဆက်ဆက်’ရဲ့ အချို့နိုင်ငံကြီး တွေကို မဖြစ်မနေပေးဆပ်ရမယ့် အြေ<ွကးတွေကိုလည်း ‘ကြား’ကနေ ဝင် ဝက် ‘ဆပ်’ပေးနေတယ် မဟုတ် လား”
”ဟားဟား..ဟားဟား..ဟား ဟား ..တော်တော်နောက်တဲ့ ဆာသော်ဒိုးစံ”
”မနောက်ပါဘူးဟာ တကယ် ပြောတာပါ။ အစိုးရမင်းအဆက်ဆက် လက်ထက်တော်ပေါင်းများစွာမှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်ဝါတွေ ‘အပေါ်က အဘတွေ’၊ ‘အလယ်က အဘတွေ’၊
‘ကျေးဇူး’ဘာညာ မသိတတ်စေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများကတော့ ကျေးဇူး မမေ့တတ်ပါဘူးခင်ဗျား..ဟားဟား ဟားဟားဟား”
”ဟားဟားဟားဟားဟား ..ဟုတ်ပါပြီ။ ဟုတ်ပါပြီ ..ဘာပဲ ဖြစ် ဖြစ်ပါ။ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက် လာတဲ့အခါ အခုလို ကူညီပေးပါဦးဗျာ”
”စိတ်ချပါ…လာခဲ့ပါ..ကူညီ ပါရစေ။ အသင့်ပါ။ ဒီကြားထဲ ကျွန်ုပ်တို့ ကလည်း ပြန်ပြီး အကူအညီတောင်းစ ရာ ကိစ္စကြီးငယ် ဘာညာရှိလာခဲ့ရင် လည်း မျက်နှာတော့ လွှဲမနေပါနဲ့ဟာ”
”ပြောပါ …ပြောပါ..အကူအညီလိုတဲ့ ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါ ကျွန် တော်တုိ့ကလည်း ကူညီမှာပါ။ အဲဒီအခါ ပြောသာပြောပါ။ အားမနာပါနဲ့ခင်ဗျာ”
”ဟုတ်ပါပြီ တကေရှိကူဒိုရာ..တကယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ နောင်တစ်ချိန်ချိန် မှာ ”တိုင်းပြည်ရန်စွယ် စူးညှောင့်ခလုတ် တွေ”ကို တွန်းလှန်ဖို့ ဖြစ်တည်လာတဲ့အခါ
‘ရဲဘော်သုံးကျိပ်အသစ်’ထပ်ဖွဲ့ဖြစ် တဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ တိတ်တဆိတ် ဆက်သွယ်ကြတာပေါ့ခင်ညာ”
အစိုးရ၏ မီတာခ တိုးမြှင့်မှု ရပ်ဆိုင်းထားရန် လွှတ်တော်က ဖိအားပေး
ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီတာခတက်သည့်အတွက် ဆန္ဒပြနေသည့် မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – စိုင်းဇော် / ဧရာဝတီ)
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က မီတာခ တိုးမြှင့် ကောက်ခံမှု လျှော့ချရေး အရေးကြီး အဆိုကို ယနေ့ အစည်း အဝေးတွင် အတည်ပြု လိုက်ပြီး လွှတ်တော် သို့ တိုးမြှင့်ထားသည့် မီတာခ နှုန်းထားများ လျှော့ချရေး စဉ်းစား သုံးသပ် မည့် အစီအစဉ် ကို တင်ပြရန် နှင့် သုံးသပ်နေသည့် ကာလအတွင်း အစိုးရအနေဖြင့် မီတာခ တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်း မပြုရန် ဖိအားပေး လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာလမှ စတင်ပြီး လျှစ်စစ်မီတာခများကို တိုးမြှင့်ရန် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး နောက် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေချိန် ယနေ့ ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မလှိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က မီတာခ ပြန်လည်လျှော့ချရေး အရေးကြီးအဆိုတရပ် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းအဆိုကို လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း၊ ယင်းအတည်ပြုချက်ကြောင့် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာလ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့် မီတာခများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး သုံးသပ်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒီနေ့ တင်သွင်းတာက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခတွေ မြှင့်တင်ထားတာကို လျှော့ချရေးပေါ့။ အဲဒီမှာ ၂ ပိုင်းရှိတယ်။ အဲဒီမှာ သာမန် လူတန်းစားတွေအတွက် တရာယူနစ် သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကို ယူနစ် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ လုပ်ပေးပါလို့ အဆိုမှာ ပြောထား တယ်။ ကျန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်း နိုင်ငံတကာမှာလို သတ်မှတ်ပေးဖို့။ နိုင်ငံတကာမှာလိုဆိုတာက Commercial လုပ်တဲ့သူ၊ Production လုပ်တဲ့သူ အလိုက်ပေါ့ သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ လုပ်ပေးဖို့။ မီတာခကို အခုလိုကြီး ၂ ဆ မမြှင့်ဖို့။ နောက်တခါ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ မျှမျှတတ သုံးစွဲခွင့်ရဖို့။ မီတာခသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ လေလွင့် နေတာ တွေကို စိစိစစ်စစ်လုပ်ဖို့။ ပြည်နယ်၊ တိုင်းနှုန်းထားတွေက တပြေးညီဖြစ်ဖို့။ ရခိုင်မှာ မီတာခ တယူနစ် ၄၀၀၊ ၅၀၀ ဖြစ်နေ ချိန်မှာ ပြည်မမှာ တယူနစ် ၃၅ ကျပ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေက မတရားဘူးလေ။ အဆိုက အတည်ဖြစ်တယ်´´ဟု မလှိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောက်က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနသည် မီတာခတိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အနီးဆုံး ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနသည် မီတာခကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေသည့် ကာလအတွင်း မီတာခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းမပြုရန် လွှတ်တော်က တောင်းဆိုထားပြီး လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န်ကြီးက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု သိရှိရသည်။
“အဆိုက အတည်ပြုထားတော့ ဒီပြဿနာကို ပြန်လည်လေ့လာပါ၊ ဆန်းစစ်ပါ၊ သုံးသပ်ပါ။ သုံးသပ်ပြီးတော့ အနီးဆုံး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို ပြန်လည်တင်ပြပါ။ သုံးသပ်လေ့လာဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီဈေးနှုန်းကို ဆက်မတိုးပါနဲ့။ ပြည်သူလူထုက အရမ်းနစ်နာတယ်။ ပြည်သူလူထုမှာ စိတ်ပူသလို စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ဘက်ကလည်း ဒီကိစ္စ အ၀၀ကို ပြန်လည်ပြီးတော့ တင်ပြမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အနီးဆုံးဆိုတာက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က နိုဝင်ဘာ လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီရက်မှာ မတင်ပြနိုင်ရင်တော့ ဖေဖော်ဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့။ နိုဝင်ဘာလမှာ တိုးကောက်မယ့် မီတာခတွေက ပျက်ပြယ်ဖို့ ပြောလိုက်ပြီ´´ဟု ဦးအေးမောက်က ဆက်ပြောသည်။
လတ်တလော ရန်ကုန်မြို့တွင် မီတာခတိုးမြှင့်မှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည် လူထုဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာ အစိုးရက မီတာခ ချက်ချင်း မပြင်ဆင်ပေးလျှင် နောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ဦးအေးမောက် က သတိပေးလိုက်သည်။
“မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေ။ အစိုးရက လွှတ်တော်ကိုလည်း အသိမပေးဘူး။ ပြည်သူကိုလည်း အသိမပေးဘဲနဲ့ တက်လိုက်တာလေ။ ဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ ဆက်ဖြစ်နေမှာပဲ။ အစိုးရဘက်က မြန်မြန်ပြန်ပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြေလည် သွားမယ်။ အစိုးရအချိန်ကြာကြာဆွဲလုပ်ရင်တော့ တမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်´´ ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက လျပ်စစ် ဓာတ်အားမီတာခတိုးမြှင့်မှု သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန် တခုတည်း မဟုတ်ဘဲ လွှတ်တော်တွင်လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအပေါ် သက်ရောက်မည့် ကိစ္စ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်က ဖြေရှင်းပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြောဆိုသည်။
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက လက်ရှိကောက်ခံနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခသည် အရှုံးပေါ်နေပြီး တလျှင် ငွေကျပ် ၁၈၅ ဘီလျံ အရှုံးပြလျက်ရှိသည့်အပြင် တလ ဓာတ်အား ယူနစ်သန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် လေလွင့်ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း၊ တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်သော မီတာခကြောင့် အရှုံးပေါ်နေမှု သက်သာမည်ဟု ပြောဆိုသည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ စ၍ ဓာတ်အား သုံးစွဲခများ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရာတွင် အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခမှာ ၁ ယူနစ်မှ ၁၀၀ ယူနစ်အတွင်း သုံးစွဲလျှင် ၁ ယူနစ် ၃၅ ကျပ်၊ ၁၀၁ နှင့် အထက် သုံးစွဲပါက ၁ ယူနစ် လျှင် ၅၀ ကျပ်၊ စက်မှု စီးပွား လုပ်ငန်းများ အတွက် ၁ ယူနစ်မှ ၅၀၀၀ အတွင်း သုံးစွဲပါက ၁ ယူနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်နှုန်း ၊ ၅၀၀၁ နှင့် အထက် သုံးစွဲပါက ၁ ယူနစ်လျှင် ၁၅၀ ကျပ်နှုန်း နှင့် အစိုးရ ရုံးသုံး အတွက် ၁ ယူနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ် ၊ အစိုးရ စက်မှုသုံး အတွက် ၁ ယူနစ်လျှင် ၁၀၀ ကျပ်သို့ တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
• မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲနိုင်မှုဟာ အာရှမှာ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ၂ဝဝ၉ ခုစာရင်းဇယားအရ အာဖကန်နစ္စတန်နဲ့ နီပေါနိုင်ငံတွေကတောင် မြန်မာပြည်ထက်သာတယ်။
• ပြည်တွင်းထွက် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ရောင်းမလဲဆိုတာ ပေါ်လစီ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်တယ်။ တရုပ်ကိုရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့လား။ ထိုင်းကိုရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့လား။ ဒီထက်နည်းမလား။ ပြည်တွင်းမှာ နည်းပြီးရောင်အုံးတော့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကာမိတယ်။
• တိုင်းတပါးကုမ္ပဏီတွေက အရမ်းဝင်လာချင်ကြတယ်။ သူတို့အပေါ် Export tax အခွန် ၂ဝ% တိုးလိုက်ရင် $10 per million BTU ဆိုတာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအတွက် မထောင်းထာပါ။
နိုင်ငံ လျှပ်စစ်သုံးနိုင်နှုန်း လျှပ်စစ်မသုံးနိုင်သူသန်းပေါင်း သုံးနှုန်း (kWh/person)
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် 41.0% 96 252
တရုပ် 99.4% 8 2631
ကမ္ဘောဒီးယား 24.0% 11 131
အင်ဒိုနီးရှား 64.5% 82 590
မလေးရှား 99.4% 0.2 3614
ထိုင်း 99.3% 0.5 2045
ဗီယက်နမ် 97.6% 2.1 918
မြန်မာ 13.0% 44 104
ဘောလုံးပွဲ အကြွေးတင်နေသော တပ်မတော် အရာရှိတစ်ဦး ရွှေဆိုင်ကို ဓားပြတိုက်
သထုံအခြေစိုက် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး (လကသ-၃၀၁၄) တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီးအောင်ခန့်မင်း ဆိုသူသည် မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ဇင်းကျိုက် ကျေးရွာရှိ ဦးတင်မြင့် ရတနာရွှေဆိုင်ကို နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် ဓားပြတိုက်ခဲ့ကြောင်း ဇင်းကျိုက် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သထုံအခြေစိုက် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး (လကသ-၃၀၁၄) တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီး အောင်ခန့်မင်းသည် ၉-မမ သေနတ်ဖြင့် ရွှေဆိုင်မှန် ခွဲပြီး၊ ရွှေများ လုယူ ဓားပြတိုက်ခဲ့ခြင်းကို ဇင်ကျိုက် ကျေးရွာမှ ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးမင်းနှင့် ဒေသခံ နှစ်ဦးတို့က ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်လည်း သေနတ် ပစ်မယ့်ဟန် တွေ့တာနဲ့ ဆိုင်အနောက်ဘက် ထွက်ပြေးပြီး ကျွန်တော် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကယ်ကြပါ အော်တော့မှ လူတွေ သိသွားလို့ ဝိုင်းဖမ်းပေး ကြတယ်၊ ဆိုင်မှန်ထု ခွဲပြီး လုယူလို့ ရွှေတွေ ပြန့်ကျဲသွားတယ်။ လျော့တော့ မလျော့သွားပါဘူး။ ယင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးတင်မြင့်က ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည် ရှင်းပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဗိုလ်ကြီးသည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ကာ ရွှေဆိုင်ထဲ ဝင်လာစဉ်တွင် ဆိုင်ကယ် ဦးထုပ်ကို ငိုက်ငိုက် ဆောင်းထားပြီး နှာခေါင်းကို အဝတ် စည်းထားကြောင်း၊ ယင်းနောက် ၎င်းတွင် ပါလာသည့် ကျောပိုးအိတ်ထဲသို့ ရွှေများ ထည့်ခိုင်းရာတွင် ရွှေထည်များ မထည့်ပေးခြင်းကြောင့် သေနတ် ထုတ်ကာ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း ယင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုသည်။
“ရွှေတွေ ယူပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် အတက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဝင်ဖမ်းတာ။ ကျွန်တော်တို့ကို သေနတ်နဲ့တော့ ပစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သေနတ်မှာ ကျည်ကတ် မရှိတော့ဘူး။ ရွှေဆိုင်မှန်ကို သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုခွဲတဲ့ အချိန်မှာ ကျည်ကတ်က အဲဒီမှာ ကျန်ခဲ့တာ ဆိုတော့ ကျည်မထွက်ဘူး” ဟု အဆိုပါ အရာရှိကို ဖမ်းဆီးပေးခဲ့သည့် ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးဌေးမင်းက ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ ဓားပြတိုက်ပြီး ရွှေထည်ပစ္စည်းများ လုယူသည့် ဗိုလ်ကြီး အောင်ခန့်မင်းကို ဇင်းကျိုက် ရဲစခန်းတွင် (ပ)၁၁၁/၂၀၁၃ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီတွင် အဆိုပါ ဓားပြတိုက်သူကို တပ်မတော် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့် အရေးယူနိုင်ရန် (လကသ-၃၀၁၄) တပ်ရင်းသို့ ပြန်လည် အပ်နှံခဲ့ကြောင်း ဇင်းကျိုက် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ဆိုသည်။
• မပြင်ဘဲနေရင် ပိုးထိုးမယ်၊ ချစားတယ်။